Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanamparam-pahefan’ny Hvm: Niharany koa i Monja Roindefo sy ny mpihary omby
Fanamparam-pahefan’ny Hvm: Niharany koa i Monja Roindefo sy ny mpihary omby
Refesin’ny fitondrana Rajaonarimampianina mihitsy ny mpifaninana pôlitika aminy ka ampiharany ny fahefam-panjakana eo aminy. Ny vahoaka Malagasy koa moa, eo anilan’izany, no iantefan’ny akon’izany. Tena azo ambara fa misandrahaka isanandro vaky ny sehatra ampiharan’ny fitondrana Hvm ny jadony sy ny fanamparam-pahefany. Niarahantsika nahita tamin’ny faritra maro ireny, ohatra, ny fandrarana an-dRavalomanana tsy nahazo nankalaza ny tsingerin-taona faha-15-n’ny Tim. Hitantsika koa ireny ny nianjady tamin’i Andry Rajoelina raha nikasa hiazo an’i Mahajanga. Ny fiaramanidina tokony hitatitra olon-tsotra mihitsy no nobaikoin’i Mavoloha ho tsy mahazo misidina tany Mahajanga satria isan’ireo tao anatiny tao i Andry Rajoelina mianakavy. Nianjadian’ny jadon-dRajaonarimampianina sy i Mahafaly Solonandrasana Olivier koa ny fiangonana katôlika tany Soaviandriana Itasy satria taorian’ny nitsidihan’i Andry Rajoelina tany tamin’ny alahady heriny (8 aprily teo) ka nitokana sy nametraka vato fehizoron’ny fotodrafitrasa iarahan’ny fiangonana katôlika any amin’ny sehatra fiahiana ra-tsosialy, dia ny hetsika ara-kolotsaina sy fialam-boly nokasain’ny fiangonana katôlika ho natao tany amin’ity fari-piadidiana iray eo anivon’ny fiangonana katôlika ity indray koa tamin’ny herinandro lasa teo no nosakanan’ny tompomenakelin’ny fitondran’i Mavoloha ka nofoanana avokoa.
Ny sabotsy teo dia niarahantsika nahita koa ny jadona nampiharin’ny fitondrana Hvm tamin’ireo solombavambahoaka tany Toamasina ary ny alahady tany Soanierana Ivongo, izay nikasa hanao tatitra tamin’ny vahoaka, mba tsy haha-tompon-trano mihono ny vahoaka any amin’ireo faritra ireo tamin’ny asa nataon’ireo olom-boafidiny teny amin’ny Antenimierampirenena.
Iny sabotsy iny koa dia niharan’ny didiko fe lehibe sy ny jadona niharo fanamparam-pahefan’ny fitondrana Rajaonarimampianina tany Tsiroanomandidy i Monja Roindefo, filoha nasionalin’ny Monima, sy ny fikambanana “Fi.Mpi.Omby Gasy” (Firaisan-kinan’ny Mpihary Omby Gasy).
Hetsika ara-toekarena sy ara-tsosialy no nokasain’ity fikambanana “FI.MPI. Omby Gasy” ity natao ny sabotsy teo, ary nanasa an’i Monja Roindefo ry zareo amin’ny maha-Filoham-boninahitr’ity fikambanana ity an’ity Praiminisitra teo aloha ity, nefa dia niharan’ny antsojay sy ny fanamparam-pahefan’ny fitondrana Hvm koa, ary niedinedina aoka izany ny tompomenakelin’i Mavoloha any amin’iny faritr’i Bongolava iny nandrara sy nanakana ary nampihatra ny fahefam-panjakana mba eo ampelan-tanany (satria nahazo baiko).
Ny tsy azo hadinoina aloha hatreto dia mamaky ady amin’ny vahoaka Malagasy ny fitondrana Rajaonarimampianina satria ny zon’ny vahoaka Malagasy mihitsy no nohitsakitsahin’izany fitondrana Hvm izany tamin’ny alalan’ny jadona nampiharina tamin’ireo tompon’andraikitra pôlitika manana ny lanjany eto amin’ny tany sy ny firenena ireo, ary azo ambara fa taratra ny fahatahoran-dRajaonarimampianina an’ireo mpisehatra pôlitika ampiharany ny jadona sy ny fanamparam-pahefana ireo izany.
Ny fikambanna Fi.Mpi.Omby Gasy” dia nanipika anefa fa lanonambe ara-toekarena sy ara-tsosialy, no voafaritra fa hatao teto Tsarahasina ny Sabotsy 14 aprily 2018, izay tokony ho notanterahina teo ambany fiahian’ny filoham-boninahiny, ny Praiminisitra teo aloha Monja Roindefo, ary fotoana koa io tokony ho nampahafantarana ampahibemaso ny maha-ara-dalàna ara-panjakana ny “Fi.Mpi.Omby Gasy”, ary koa tokony ho nitokanana ny birao fiasana eto amin’ny Renivohitr’i Bongolava, nefa dia voasakana.
isan’ny nomarihin’ny Fi.Mpi.Omby Gasy” koa fa nanasa ny manam-pahefana teto an-toerana sy eto amin’ny firenena ry zareo tamin’io, ary nanasa koa ny mpanolotsaina ara-toekarena avy amin’ny Ambasady vahiny miasa eto amintsika, ankoatra ny nanainga ny mponin’i Tsiroanomandidy sy ireo manodidina hifanotrona aminy, nefa dia samy tsy nomen’ny mpitondra jadona hasina izany.
Navoitran’ny Fi.Mpi.Omby Gasy fa “io lanonana ara-toekarena natao handraisan’ny olom-pirenena anjara io dia nanamparan’ny Prefen’ny Faritra sy ny Lehiben’ny Faritra fahefana ka nosakanany tsy azo natao tamin’ny ora farany, eny, na dia nanaiky aza izahay fa tsy hatao eny amin’ny Tranompokonolona sy ny arabe ny lanonana. Amin’ny toerana voafaritra, fananana manokana (propriété privée) an’ny Misiona Katôlika, izay nanome alalana no nosafidiana hanaovana ny hetsika nefa dia ny sabotsy 14 aprily tamin’ny dimy ora maraina, no nandefasan’ny manam-pahefana eto an-toerana mpitandro ny filaminana avy amin’ny “Emmo Reg”, nirongo fiadiana, teny an-toerana. Tamin’izany izy ireo no nanala an-keriny ny fitaovana fanamafisam-peo, izay efa voapetraka ny fikambanana”, hoy i Sambo Sofy, filohan’ny Fi.Mpi.Omby. Nomarihiny mihitsy aza fa “inoana ho voabaiko avy amin’ny mpitondra fanjakana foibe, na nahazo fankatoavana avy amin’izy ireo izao fanamparam-pahefana izao”.
“Vakianay bantsilana ary ampahafantarinay mazava fa tena fanamparam-pahefana izao ny fisakanana ny Filoham-boninahitra Monja Roindefo, Filoha nasionalin’ny antoko Monima ary Praiminisitra teo aloha, tsy hihaona amin’ireo mpihary omby sy ireo mpiray tanindrazana aminy aty Bongolava”, hoy hatrany ny fanambaran’ny fikambanan’ireo mpihary omby.
“Tena fihoaram-pefy tsy azo ekena ny nataon’ny fitondram-panjakana ankehitriny satria nohosihosen’izy ireo ny zo fototra iray, dia ny fahafahana mivory malalaka, izay vato fehizoron’ny Demokrasia”, hoy ny fehin-tenin’ity fikambanana ity.